LELIPHI IJELO LE-TV ELIKWIARSENAL V TOTTENHAM? KHABELA IXESHA KUNYE NOKUSASAZA NGQO-IRADIO TIMES - IBHOLA EKHATYWAYO
Lithini ijelo lomdlalo weArsenal v Tottenham Premier League? Khaba ixesha, usasaze ngqo kunye neendaba zeqela zamva nje
I-Tottenham iyathemba ukwenza iligi kabini kwiArsenal okokuqala ukusukela ngo-1993 xa la macala edibana emantla eLondon ngeCawe.
I-Spurs ibethe i-Gunners ngo-2-0 ekuqaleni kwale sizini enkosi kwiinjongo ezivela ku-Son Heung-min no-Harry Kane, kwaye amadoda kaJose Mourinho asenethemba elifutshane lokuphumelela i-Champions League kwisizini ezayo.
IArsenal iye yangena phakathi kwetafile kule kota kwaye iphelelwa yimidlalo yePremier League ukuyitsalela kumlo waseYurophu.
Bukela iArsenal v Tottenham kwiSky Sports
Ewe kunjalo, iiGunners ziye zathwaxwa ngumlo okhathazayo u-1-1 eBurnley okokugqibela obonakalise ukusilela kwabo kwinqanaba apho kuye kwafuneka balinganise ibhola ngoLwesine ebusuku nangeCawa emva kwemini.
Olu ungquzulwano luphele ngo-2-2 kwisizini ephelileyo njengoko iArsenal ibisilwa isuka kwiinjongo ezimbini ezantsi kodwa iSpurs ayinakulindela ukuba imbali iziphinde.
RadioTimes.com ujikeleze yonke into oyifunayo malunga nendlela yokubukela iArsenal v Tottenham kumabonwakude nakwi-intanethi.
Ihlala nini iArsenal v Tottenham kwiTV?
IArsenal v Tottenham iya kuqhubeka NgeCawa nge-14 kaMatshi 2021 .
IArsenal v Tottenham iya kuqala 4:30 pm .
Kukho imidlalo emininzi yePremier League eqhubeka kule mpelaveki kubandakanya iMan Utd v West Ham, eqala ngo-7: 15 ngokuhlwa ngeCawa.
Leliphi ijelo le-TV elikwiArsenal v Tottenham?
Ungawubukela umdlalo bukhoma Imidlalo yeSky IPremier League kunye noMnyhadala ophambili ukusuka ngentsimbi yesi-4.
Uhlala njani ukusasaza iArsenal v Tottenham kwi-Intanethi
Abathengi beMidlalo yeSky banokusasaza umdlalo nge-app ye-Sky Go kwizixhobo ezahlukeneyo kubandakanya uninzi lwee-smartphones kunye neetafile njengenxalenye yobhaliso lwabo.
NGOKU umabonwakude unokusasazwa ngekhompyuter okanye ii -apps ezifumaneka kwii-TV ezininzi, iifowuni kunye neengcebiso. NGOKU i-TV ikwafumaneka nge-BT Sport.
Iindaba zeqela leArsenal v Tottenham
IArsenal: UMikel Arteta uneqela elipheleleyo anokukhetha kulo. U-Emile Smith Rowe ubuyile phakathi evekini, ngelixa uNicolas Pepe naye ecela ukuqala ngokulandela umboniso ophuculweyo.
I-Calum Chambers inokuthenjwa kwakhona kukhuselo kulandela ukubonakala okuqinileyo kumqolo weveki ephelileyo.
ITottenham: UHarry Kane unike iqela lakhe ukothuka kancinci phakathi evekini emva kokutsala amanqaku amabini ngokuchasene neDinamo Zagreb. Wayekhutshiwe kwaye wadlala ipakethi yomkhenkce kwintsalela yomdlalo, kodwa kulindeleke ukuba akulungele ukudlala apha.
UGiovani Lo Celso kuphela komntu ongekhoyo kodwa uhlala kwicala elithandabuzekayo lesikali emva kwemicimbi yangasemva.
IArsenal v Tottenham ingxaki
Ukubheja365 amathuba: IArsenal ( 31/20 Zoba ( 12/5 Tottenham ( 7/4 ) *
Kuzo zonke iingxaki zakutshanje zePremier League nangaphezulu, ndwendwela ukubheja365 namhlanje kwaye ubange iakhawunti evulekileyo yokufumana 'ukuya kuthi ga kwi-100 yeekhredithi kwi-Bet Credits **', usebenzisa ikhowudi yebhonasi 'RT365'.
Uqikelelo lwethu: IArsenal v Tottenham
IArsenal kunqabile ukuba yohlulwe emva kwiligi ngokuchasene neTottenham kodwa imbali ayinakulindeleka ukuba ibe kwicala labo kule Cawa.
Icandelo elihlaselayo likaSpurs likaKane, uNyana, uGareth Bale kunye no-Dele Alli lize lalo kwezi veki zidlulileyo- kwaye sinokubona ukuba kuthunyelwe e-Emirates kwisiphumo esiyingozi.
Lo mdlalo unokwehla kwindlela iArsenal ephatha ngayo uhlaselo lokulwa ekhuphisana nabo abo bajongana nabo baya kujonga ukuqala. Ubukho bukaThomas Partey embindini buya kuba yinto ephambili- kodwa nangona kunjalo ayinakulunga ukuthintela impumelelo.
Uqikelelo lwethu: IArsenal 1-3 iTottenham ( 1/22 e ukubheja )
Ukwaphuka ngokupheleleyo ukuba yeyiphi imidlalo ezayo jonga eyethu Imidlalo yeNkulumbuso kwisikhokelo seTV.
ngubani ophumelele i-british bake 2017
kayode damali yiza kutya nam
thanda isiqithi sexesha 1 cast
Ukuvota ngokungqongqo kuza ngokungqungqa
Ixesha le-peaky blinders 3 umhla womoya we-Netflix
ibango 5 ekhaya kude